Torolàlana momba ny fisafidianana fitaovana - Createpoto - Createproto Tech Co., Ltd.
RESOURCES / Torolàlana momba ny fisafidianana fitaovana
Ity ny lisitra mitarika ny fisafidianana fitaovana, misy ny famaritana, ny toetra, ny fampiharana ary ny mikraoba hafa toy ny etsy ambany, azonao atao ny manamarina azy amin'ny antsipiriany rehetra ary avy eo misafidy ireo fitaovana mety indrindra.
Famaritana: Ity plastika injeniera lafo vidy ity dia manome tanjaka ara-mekanika sy ambonimbony miavaka ho an'ny faritra maro be ampiasaina amin'ny fampiharana avo lenta.
Toetra mampiavaka azy: Pne an'ny fitaovana fanodinana Prototype CNC mahazatra, milina mora, thermoformed ary hafanana, ABS koa azo hosodoko sy hopetahana ho an'ny fahaizan'ny manampy. Ny fitoniana hafanana sy refy dimensional tsara dia manitatra ny fahaizany mamindra modely mialoha ny famokarana ABS.
Fampiharana: Fitaovana ankapobeny ao an-trano, kilalao, faritra mandeha amin'ny fiara, fitaovana ao an-dakozia, kojakoja amin'ny solosaina, fitaovana laboratoara, faritra misy ny milina telefaona / fax, fefy elektrika / elektronika, fiaramanidina ary trims
Famaranana azo alaina: Famaranana amin'ny milina, famaranana malama, fipoahana fasika, famaranana voadio, voaloko na volondavenona vita amin'ny volondavenona, elektrôlika
Fanamarihana: ny akora voajanahary dia misy amin'ny loko fotsy White. Ny ampahany lehibe sy saro-pantarina misy undercuts dia azo atao mora foana amin'ny fizarana ary afatotra. Safidy ara-toekarena ho an'ny milina prototype CNC.
Fahalemena: Tsy mety amin'ny menaka, loko ary solvents miorina amin'ny solika. Hafanana antonony, hamandoana ary simika, fanoherana ny toetr'andro. Afaka mamoritra mora foana. Flammable amin'ny famokarana setroka avo.
Ny karazana fitaovan'ny CreateProto: ABS - ABS voajanahary - Black ABS - Flame Retardant UL-94V0
Dity (g / cm³): 1.06
Sitrana rano (%): 0,25
Herin-tsaina (Mpa): 38
Tulusile Modulus (MPa): 2100
Elongation amin'ny fiatoana (%): 35
Izod fiantraikany amin'ny tanjaka (J / m): 300
Hery matanjaka (MPa): 65
Flexural Modulus (MPa): 200
Heat Deflection Temp - 0.46MPa ©: 98
Heat Tempolan'ny hafanana - 1.8MPa ©: 94
Famaritana: PolyCarbonate tsy feno (PC) dia thermoplastic injeniera henjana sy maharitra, marihitra noho ny fanoherana mahery vaika, fanoherana ny hafanana ary ny toetran'ny optika.
Toetra mampiavaka: fanoherana ny fiatraikany avo lenta, fahamendrehana tsara, fitehirizana tanjaka tsara amin'ny mari-pana miakatra, coefficient ambany fanitarana hafanana, fitoniana Dimensional tsara. Insulator elektrika tsara ary manana fananana miady amin'ny hafanana sy maharitra.
Fampiharana: Fitaovana fiarovan-doha mitondra fiara sy ampinga fiarovana, fitaovana fitsaboana / fitsaboana, fitaovam-pitaterana otrikaretina, indostria fananganana, entam-panatanjahantena, fitaovana, fanararaotana sy trano, kojakoja elektrika / elektronika, mpampifandray, kapila mifatotra, fitaovana telecommunication
Famaranana azo alaina: Famaranana amin'ny milina, famaranana malama, fipoahana fasika, fitaratra poloney, polona etona, famaranana translucent (endrika toa manjavozavo toy ny jiro), voaloko na volondavenona voalohany.
Fanamarihana: mazàna ny faritra dia manana jiro manjavozavo aorian'ny milina prototype CNC fa ny mangarahara dia azo ahatongavana amin'ny famolahana. Ny tanjaka, ny faharetany, ny fanoherana ny fiantraikany ary ny mangarahara no mahatonga azy io ho fitaovana mety tsara amin'ny fampiharana struktural sasany. Ny ampahany lehibe sy saro-pantarina misy undercuts dia azo atao amin'ny fizarana ary mifatotra.
Fahalemena: iharan'ny famakiana noho ny fihenjanana, fanoherana antonony ny zavatra simika, fanoherana ambany.
Ny karazana fitaovan'ny CreateProto: PC - Clear PC - Black PC 20% GF - Mainty
Dity (g / cm³): 1.2
Sitrana rano (%): 0.15
Herin-tsaina (Mpa): 64
Tulusile Modulus (MPa): 2200
Elongation amin'ny fiatoana (%): 75
Izod fiantraikany amin'ny tanjaka (J / m): 750
Hery matanjaka (MPa): 95
Flexural Modulus (MPa): 2300
Heat Deflection Temp - 0.46MPa ©: 138
Tempa fitetezana hafanana - 1.8MPa ©: 130
Famaritana: fantatra ihany koa amin'ny hoe PMMA (PolyMethyl-MetaAcrylate) dia fitaovana thermoplastic amorôbia manana toetra optika tena tsara. Ny akrilika dia matetika ampiasaina ho solon'ny vera. Akrilika
Toetra mampiavaka azy: mazava mazava tsara amin'ny optika, fanoherana ny abrasion tsara, fitoniana eo amin'ny tontolo iainana tena tsara, fanoherana hafanana tsara, fanoherana simika tsara. Famoahana setroka mirehitra nefa ambany.
Fampiharana: rakotra fanaovan-jiro automatique, jiro fanaovan-jiro, tavoahangy mazava sy fonosana fitoeran'ny fitoeran-jiro, lantiva, fivarotana fivarotana, fanamoriana fiaramanidina, tranga fisehoana vaovao, famantarana, fitaovana, fanaka maoderina, kojakoja firavaka, fangatahana fitsaboana / fitsaboana. PMMA dia manana mari-pahaizana tsara mifanaraka amin'ny vatan'olombelona.
Famaranana azo alaina: Famaranana milina, famaranana malefaka, fitaratra poloney, poloney lelafo, famaranana translucent, fandokoana na famaranana miloko.
Fanamarihana: PMMA dia iray amin'ireo fitaovana ara-toekarena milina CNC manoloana ny Polycarbonate (PC) rehefa tsy ilaina ny tanjaka mahery. Ny anaran'ny varotra akrilika dia ahitana Plexiglas, Lucite ary Perspex. Ny ampahany lehibe sy sarotra dia azo miraikitra.
Fahalemena: fanoherana ny fiatraikany ratsy, iharan'ny famoretana amin'ny adin-tsaina, tsy mety ampiasaina amin'ny hidrokarôma vita amin'ny klôro na manitra. Natiora marefo, ny PMMA dia mivonto ary miempo ao anaty solvent organika maro.
Ny karazana fitaovan'ny CreateProto: PMMA - Clear PMMA - Mainty
Dity (g / cm³): 1.18
Sitrana rano (%): 0.4
Herin-tsaina (Mpa): 70
Modulus Tensile (MPa): 2800
Elongation amin'ny fiatoana (%): 10
Izod misy fiantraikany amin'ny tanjaka (J / m): 22
Hery matanjaka (MPa): 96
Flexural Modulus (MPa): 3200
Heat Deflection Temp - 0.46MPa ©: 110
Heat Deflection Temp - 1.8MPa ©: 95
Famaritana: ny acetal fantatra amin'ny anarana hoe POM (PolyOxyMethylene) dia injeniera Thermoplastic izay matetika ampiasaina amin'ny singa marim-pototra izay mitaky henjana avo, fikorontanana ambany ary fitoniana dimensional tsara.
Toetra mampiavaka: mahatohitra abrasion tsara mari-pana miasa, fisehoana manjelanjelatra, faharetana tena tsara Mahalefaka tena, tanjaka ary hamafisana. Faritra fanoherana simika (ao anatin'izany ny solvents maro). Toetra elektrika sy diélectrika tsara.
Fampiharana: Gears, Bearings, Screws, faritra momba ny paompy, singa elektronika, insulator, faritra fitsaboana, kojakoja fanaka, vatana valve, Ziper, fampiharana anaty rano.
Famaranana azo alaina: Famaranana milina, famaranana malefaka, fipoahana fasika, famaranana voadio
Fanamarihana: Mora milina fa sarotra be ny mifamatotra. Fisehoana tsara miaraka amin'ny famaranana gloss. Matetika ny acetaly dia mifaninana amin'ny Nylons amin'ny fampiharana mitovy fa ny marimaritra iraisana dia mitaha amin'ny Nylon amin'ny toetr'andro lena sy mando.
Fahalemena: Sarotra be ny mamatotra, tsy dia manohitra ny asidra, ny hery misintona ary avo lenta. Sarotra ny mandoko. Ny ampahany lehibe sy manify miaraka amin'ny fizarana rindrina tsy ara-dalàna dia mora voan'ny warpage.
Ny karazana fitaovan'ny CreativeProto: Acetal - Acetal voajanahary (fotsy) - Mainty
Density (g / cm³): 1.41
Sitrana rano (%): 0.27
Herin-tsaina (Mpa): 67
Tulusile Modulus (MPa): 2900
Elongation amin'ny fiatoana (%): 40
Izod fiantraikany amin'ny tanjaka (J / m): 100
Hery matanjaka (MPa): 87
Flexural Modulus (MPa): 2900
Heat Deflection Temp - 0.46MPa ©: 165
Tempa fitetezana hafanana - 1.8MPa ©: 125
Famaritana: Nylon dia fanondroana iraisana ho an'ny fianakaviana polymèntetika synthetic fantatra amin'ny anarana hoe PA PolyAmides. Nylons (Polyamides) dia ahitana ny plastika injeniera lehibe indrindra miaraka amina fampiharana marobe. Nylon dia mazàna matanjaka, henjana ary mitafy.
Toetra mampiavaka azy: fanoherana ny abrasion tena tsara, fanitarana avo, fanoherana tsara ny solika, solika ary solvents fa voan'ny asidra sy ireo fotony mahery. Fahasarotana tsara, tanjaka mahery vaika, fanoherana mahery vaika, fitoniana tsara refy.
Fampiharana: Mety amin'ny fampiharana amin'ny akanjo toy ny Bearings sy Gears, Entana fanatanjahan-tena, tsipika fanjonoana, faritra misy fiara, fiara mifono vy, faritra momba ny injeniera, fitaovana enti-miasa, Manifold Intake.
Famaranana azo alaina: Famaranana milina, famaranana malama, fipoahana fasika.
Fanamarihana: ny nylons dia matetika ampiasaina amin'ny lamba, fiara, karipetra ary fanatanjahan-tena noho ny faharetany sy ny tanjany. Nylon dia manana fanoherana tsara kokoa noho ny Acetal, saingy tsy manana fanoherana hamandoana tsara izay mahatonga azy tsy mifanaraka amin'ny hamandoana avo.
Fahalemena: manintona ny toetran'ny herinaratra sy mekanika ny fitrohana ny hamandoana avo. Notafihan'ny Asidra mahery, Bases, agents of oxidizing. Fahatsapana avo lenta.
Ny karazana fitaovan'ny CreativeProto: Nylon 6/6 - Voajanahary (fotsy) Nylon 6/6 30% GF - Mainty
Dity (g / cm³): 1.14
Sitrana rano (%): 1.9
Herin-tsaina (Mpa): 75
Modulus Tensile (MPa): 2300
Elongation amin'ny fiatoana (%): 90
Hery matanjaka (MPa): 80
Flexural Modulus (MPa): 3000
Heat Deflection Temp - 0.46MPa ©: 200
Heat Deflection Temp - 1.8MPa ©: 90
Famaritana: PolyPropylene dia thermoplastic semi-opaque be mpampiasa amin'ny karazana fampiharana. Polypropylene dia mahazaka fanoherana tsara ny havizanana. PP dia manolotra fitambarana toetra ara-batana, simika, mekanika, hafanana ary elektrika miavaka.
Toetra mampiavaka azy: fanoherana tsara ny harerahana. Maivana miaraka amina fifangaroana henjana sy malefaka tsara. Manohitra ny ankamaroan'ny alkaly sy asidra. Sakana ny hamandoana ambany sy tsy misy poizina. Fanoherana ny fiantraikany tsara. Mihazona henjana sy malefaka.
Fampiharana: Fandraisana an-trano, fonosana sakafo, fampiharana ara-pahasalamana sy laboratoara satria mahazaka ny hafanana amin'ny autoclave, Components Pump, Casings with Living Hinges, Automotive parts, Food Containers, Industrial Applications, Loudspeaker drive unit, Fitaovana ao an-trano.
Fanamarihana: Polypropylene dia iray amin'ireo plastika maivana indrindra misy. Mora milina ary manome famaranana malama. Koa satria mahatohitra ny harerahana ny PP, dia mahatonga azy io mety amin'ny ankamaroan'ny faritra vita amin'ny plastika velona, ​​toy ny satroka tavoahangy ambony.
Fahalemena: Sarotra apetaka. Rava noho ny taratra UV, notafihan'ny solventsana klorino sy ireo fofona manitra. Ny ampahany mivelatra sy manify amin'ny rindrina dia mora simba na warpage aorian'ny milina.
Ny karazana fitaovan'ny CreateProto: PP - PP voajanahary - PC mainty 20% GF - Mainty
Dity (g / cm³): 0.9
Sitrana rano (%): 0,03
Herin-tsaina (Mpa): 33
Modulus Tensile (MPa): 1300
Elongation amin'ny fiatoana (%): 185
Izod misy fiantraikany amin'ny tanjaka (J / m): 60
Hery matanjaka (MPa): 45
Flexural Modulus (MPa): 1550
Heat Deflection Temp - 0.46MPa ©: 100
Heat Deflection Temp - 1.8MPa ©: 50
Famaritana: ny aliminioma no vy tsy ferrous be mpampiasa indrindra. Aluminium dia metaly malefaka, maharitra, maivana, mora mandehandeha ary mora volavolaina miaraka amin'ny endriny manomboka amin'ny Silvery ka hatrany amin'ny Gray Gray, arakaraka ny fahasarotan'ny tany. Ny aliminioma dia mamorona firakotra oksida miaro ary mahazaka harafesina be.
Toetra mampiavaka azy: Aluminium dia mpitazona hafanana sy herinaratra tsara, fanoherana ny fikajiana tena tsara, tsy andriamby ary tsy mitete. Ny Aluminium dia azo averina 100% tsy misy very ny toetra voajanahary. Ny Aluminium dia taratra taratry ny mazava sy hafanana hita maso.
Fampiharana: singa lehibe ho an'ny fiara, fiaramanidina, kamio, lamasinina. Fampiharana fonosana toy ny kapoaka zava-pisotro, foil. Indostrian'ny fanamboarana, Fitaovana isan-karazany ao an-trano, Elektronika ho an'ny mpanjifa, milentika hafanana ho an'ny fitaovana elektronika.
Famaranana azo alaina: Famaranana milina, famaranana vita poloney, fitaratra poloney, poloney borosy, fipoahana vakana (Mba hanomezana fefy vita an-tsoratra Matt), fanodinana, hosodoko, firakotra vovoka.
Fanamarihana: ny Aluminium dia vy maivana be ary milanja 2,7 g / cm3, manodidina ny ampahatelon'ny vy. Mampiasa kilasy Aluminium 6061 sy Aluminium 5083 izahay ho an'ny milina prototype CNC.
Fahalemena: Ny aliminioma dia vy tena maivana miaraka amin'ny lanjany manokana 2,7 g / cm3, manodidina ny ampahatelon'ny vy. Mampiasa mari-pahaizana Aluminium 6061 sy Aluminium 5083 ho an'ny milina.
Ny karazan-pitaovan'ny CreateProto: Aluminium 6061 Aluminium 6061-T6 Aluminium 7075
Dity (g / cm³): 2.7
Sitrana rano (%) __
Tensile Strength (Mpa) __
Tulusile Modulus (MPa) __
Elongation amin'ny fiatoana (%) __
Izod misy fiatraikany amin'ny tanjaky ny hery (J / m) __
Hery matanjaka (MPa) __
Heat Deflection Temp - 0.46MPa © __
Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Prototyping haingana sy famokarana, Cnc Prototyping haingana, Prototyping haingana, Cnc Prototyping, Prototyping haingana,